ကျွန်တော် StartUp လေးလုပ်ချင်ပါတယ် – Minn Ko Aung – Medium
Minn Ko Aung
ကျွန်တော် StartUp လေးလုပ်ချင်ပါတယ်
ကျွန်တော် StartUp လေးလုပ်ချင်ပါတယ် … ခင်ဗျားတို့လဲလုပ်ချင်ကြမှာပါ… လူတော်တော်များများက မိမိကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလေးလုပ်ချင်တာ သဘာ၀ဘဲလေ… ကျွန်တော် အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားဘူးပါ…( ငွေအရင်းမနှီးမပါဘဲကော… အရင်းအနှီးအတိုင်းအတာတခုထိစိုက်ထုတ်ပြီးကော…ပေါ့) ခုလဲလုပ်ကြည့်နေတုန်းပါဘဲ…
အခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ လူငယ်တွေ Starup လုပ်တာပြဿနာသိပ်မရှိကြဘူး… အဲ့တော့ ကိုယ်တွေက တခြားနိုင်ငံကစာအုပ်တွေ “ How to be good Entrepreneur” တို့ “How to start Your StartUp” တို့ ဖတ်ပြီး …လုပ်မိရင် ခင်ဗျား ဂွမ်းဖို့က 60% သေချာသွားပြီ…ဘာလို့လဲဆိုတော့
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာပြဿနာတွေရှိသေးတယ်(ခုထိဘဲ)… အဲ့ဒါက ဘာလဲဆိုတော့…..
သေချာတဲ့စီးပွားရေး အစီအစဉ်တခုမရှိဘဲ ခင်ဗျားလုပ်လို့မရပါဘူး…. သူများတွေလုပ်လို့၀င်လုပ်တယ်ဆိုရင် အဲ့ဒါ StartUp မဟုတ်တော့ပါဘူး Popping ဖြစ်သွားပါပြီ.. ဖြစ်နိုင်ရင် (3) နှစ်စာလောက် Plan ကိုကြိုဆွဲထားပါ။
FullTime လုပ်ရင်း Startup လုပ်မယ်ဆိုရင် ငွေကြေးစိုက်ထုတ်မှုအရဘယ်လောက်တောင့်ခံနိုင်မလဲဆိုတာဘာဘဲ….. ဒီမှာက 90% Self Funding လုပ်ရပေမဲ့ သူတို့ဆီကလို ငွေ၀င်လမ်းမဖြောင့်ဘူး… Customer ဘယ်လောက်ရှာရင်ဘယ်လောက်ရပ်တည်နိုင်မယ်ဆိုတာ ဒီမှာဆိုဟာသဖြစ်သွားပြီ… Customer ဘယ်လောက်ရှာရင်ဘယ်ရောက်ရပ်တည်နိုင်မှာထက် …ခင်ဗျား တစ်လကို ဘယ်လောက်ထပ်ရင်းနိုင်မလဲက အရေးကြီးသွားပြီ
ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်မေးရမှာက “ဘယ်လောက်အားစိုက်/အာရုံစူးစိုက်နိုင်မလဲ/ဘယ်လောက်စိတ်ရှုပ်ခံနိုင်မလဲ? ဘယ်လောက်ကြာကြာလဲဆိုတာပါ”…
StartUp တွေဟာ အချိန်ကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ပိုက်ဆံပြန်မရတတ်ပါဘူး… (ပြန်မရတဲ့အပြင်ထပ်တောင်စိုက်ရင်စိုက်ရသေးပါတယ်)… အဲ့ဒီတော့ Vendor/Investor မပါဘဲ “ဘယ်လောက်ကြာကြာတောင့်ခံနိုင်မလဲ” ဆိုတာကလဲ မေးခွန်းပါဘဲ….
StartUp တွေက သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်ရဲ့ class people တွေဖြစ်ရဦးမယ်…. Founder/Co-Founder တွေက Professional မဖြစ်ရင်တောင် သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်မှာ Crazy ဖြစ်နေရမယ်… Keypointsတွေကိုအဆက်မပြတ်လေ့လာနေနိုင်ရဦးမယ်… ပြီးတော့ ဆက်စပ်မှုတွေကိုစဉ်းစားနိုင်ရမယ်…. စဉ်စားမှုတွေကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရဦးမယ်…
သေချာတယ် ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ TeamWork အားနည်းတာကို ခင်ဗျားငြင်းလို့မရဘူး… TeamWorking က StarUp တစ်ခုရဲ့ ကျောရိုးဆိုတော့က အာ့ဒါကြီးထူထူထောင်ထောင်ဖြစ်အောင် ခင်ဗျား FullTime အလုပ်လုပ်နေရင်းကို ပျိုးထောင်နိုင်ပါ့မလား.. (#TeamWork နဲ့ပတ်သတ်ပြီး လေ့လာထားမိသမျှှကို ပြန်Share ဖို့စာရေးပါဦးမယ်..)
အဲ့တော့ ခင်ဗျားပြန်မေးပါ StartUpလုပ်မယ်ဆို ဒါတွေအားလုံး(အပေါ်ကဟာတွေ) ခင်ဗျားဖြတ်ကျော် သည်းခံနိုင်ပါ့မလား….????? ပြည့်စုံနိုင်ပါ့မလား??????
Never missastory from Minn Ko Aung, when you sign up for Medium. Learn more
Never missastory from Minn Ko Aung